Edito Am-pitiavana be
Na samy resy na samy handresy !
“Tsy resy akory ny resy raha noresen’ny mpampandresy fa ny tena mpandresy dia izay mahay resy raha toa ka tena resy”, hoy ilay mpandinika raharaham-pirenena iray izay.
Miteraka adihevitra goavana ho an’ny mpanara-baovao sy any anaty tambajotram-pifandraisana ara-tsosialy amin’izao ny momba ilay fianianan’ny filoha tsy hisy fotoam-pivavahana, tsy hisy fampiasana baiboly.
fito andro katroka sisa dia handray ny fahefany amin’ny fomba manetriketrika ny filoham-pirenena vaovao.
Alahelom-bahoaka no ilafihana !
Fa inona ihany no tiana hahatongavana eto amin’ity firenena ity e ? Efa nanaiky sy nilefitra ny kandida an-kilany tamin’ny fifidianana, ary efa nitsodrano ilay ambara fa lany na azo iadian-kevitra aza ny fahalaniana.
Mbola mitoetra ny ahiahy
Mandritry ny herinandro raha kely indrindra, dia ny mikasika ny filoham-pirenena vaovao foana no resaka eny amin’ny fiarahamonina sy tambajotran-tserasera eny, raha politika no resahana.
Tsy folaka fa milefitra
Nivoaka iny ny valim-pifidianana, ka na nisy aza ny fifanandrinana niainga tany amin’ny latsa-bato, ny fifanolanana tany amin’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana,…
Andro lehibe eo amin’ny tantaram-pirenena ity 8 janoary 2019 ity, izay hanambaran’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny vokatra ofisialin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa.
Afaka 5 andro sisa raha ela indrindra dia hamoaka ny valim-pifidianana filoham-pirenena, fihodinana voalohany, amin’ny fomba ofisialy ny avy eo anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.
Mandra-pahatonga izay fotoana izay dia hiaraha-mahita sy mandre ny zava-misy fa mifamahofaho ny hetsika miseho eny anivon’ny fiarahamonina eny. Ao ireo mangataka tsy misy hatak’andro ny fanafoanana iny fifidianana efa nivaly iny. Ao kosa anefa ireo milefitra ihany na dia eo aza ireo tsy fahatomombanana niseho ary dia mampirisika hoe ny efa natomboka tokony hisy farany hatrany. Ireo mba te hametraka ny tenany ho mpanelanelana sy mpandrindra moa dia nanambara kosa fa fotoana tokony hifampihainoana sy hifamitranam-pihavanana izao. Ny mahagaga dia dia tokana ny fehiny hitan’ny mpanara-baovao. Tsy milamina hatrany am-boalohany ka hatramin’izao ny zotram-pifidianana hita. Rehefa jerena ny fomba fijery sy ny fomba fandinik’ireo afaka maneho hevitra dia toy ny mizotra avokoa amin’ny hoe misy miketrika fanakorontanana eto. Misy matahotra fihodinana faharoa eto. Misy manao izay ho afany hiverenana amin’ny fitondrana eto. Izany hoe raha aravona dia resaka seza ilay raha, hoy ry zareo mpikirakira tavamboky izay. Ampiadiana ny eny Ambalambahoaka eny noho ny resaka seza. Korontanina ny eny Ambalambahoaka eny noho ny resaka seza. Voizina ny resaka fanorenana ifotony sy ny fanafoanana fifidianana dia tsy inona akory no antony fa noho ny seza ihany. Inona tokoa moa no antony hanaovana politika, hoy ny sasany, raha tsy izay. Mety ho marina saingy midika kosa anefa ve fa antony tokony hisarihana fifandrafiana sy adim-poko na ra mandriaka mihitsy izany ? Anjaran’ny rehetra angamba no mandinika sy mieritreritra manoloana ny hafatra am-pitiavana be izany. Ho an’ny mpisehatra politika rehetra fa tsy ny vahoaka tsy mandady harona ihany.